HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraLimak Kolin Cengiz Consortium Waxa lagu saxiixay Ankara High Speed ​​Train Station
11 / 09 / 2012 06 Ankara, News Exclusive, BULSHADA BULSHADA, Xaraashyada, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Ankara yht gari wuxuu noqday xarunta cusub ee nolosha ee caasimada
Limak Kolin Cengiz Consortium ayaa gudbisay 19 sannadka 7 ee xilliga hawlgalka ee Ankara High Speed ​​Train Station. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) by kala iibsiga dhista shaqeeyaan-(robot) Ankara inaad codsato markii ugu horeysay ee model ah ee High Speed ​​Rail Station in ay curdan tahay Liu dhismaha-dhismaha-Cengiz Dhismaha dallad choline, muddada hawlgalka ee 19 sano ku bixiyeen sidii bilood 7 ah.
Maareeyaha Guud ee TCDD iyo Gudoomiyaha Komishanka Qandaraaska Ismet Duman, Waaxda Hantidhowrka iyo Hagaha Qeybta Dhismaha ee shirweynaha, ayaa sheegay in soo jeedinta la qiimeeyay iyadoo la raacayo shuruudaha farsamo iyo maaliyadeed, ayaa sheegay in hindisuhu uu ku filan yahay.
Ismet Duman, ka dibna wuxuu furay baqshadda hareeraha xubno ka tirsan saxaafadda, xilliga hawlgallada ee Limak Construction-Kolin Construction-Cengiz dhismaha 19 ee 7 ee muddada bilawga ee lagu dhawaaqay ayaa lagu dhawaaqay.
Duman wuxuu sheegay in hindisaha loo gudbin doono guddiga agaasimaha TCDD ee habraaca soo socda iyo in hindisada la dhammeeyo ka dib markii uu ansixiyay Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yıldırım.
Gudaha Guud ee Gudkentray Gülermak-Kolin OGG
Madaxweyne Ku-xigeenka TCDD iyo Guddoomiyaha Komishanka Qandaraaska Ismet Duman
Magaalada Adana, mintidiinta ayaa siiya maxkamad bilaash ah
Mana aha wax la yaab leh 2023 bartilmaameedyo tayo sare leh